Tine zvinopfuura zana shanduko pakati pe beta 100 uye beta 2 ye iOS 3 | IPhone nhau
Tine zvinopfuura zana shanduko pakati pe beta 100 uye beta 2 yeIOS 3
Zvinotaridza kuti pane shanduko shoma dzatinadzo pakati peimwe vhezheni yeIOS 11 uye imwe, asi muchokwadi beta shanduro dzinovandudza kuchengetedzeka uye kugadzikana kwezvinhu kuwedzera kune wedzera shanduko diki uye zvitsva zvingave zvisingaonekwe vazhinji vedu.
Mune ino kesi zviri nani une mudziyo une beta 2 yeIOS 11 uye imwe ine beta 3. Neizvi hatisi kushaya nharo dzekuwana mutsauko pakati pevaviri uye sezvo vhidhiyo iyi yatinozoona mushure mekusvetuka ichitiratidza zvakanaka, kune zvakawanda kupfuura zvatinofunga.
Hatisi kureva kuti ndezve nhau kana shanduko inoshamisa, asi kana iri yeshanduko pakati peshanduro. Iyi ndiyo vhidhiyo inotiratidza Zvese Apple Pro mauri kuona zvinopfuura zana shanduko uye nhau Mune yazvino beta vhezheni yeIOS 11 beta 3 yakaburitswa mazuva mashoma apfuura:
Chaizvoizvo dzimwe dzenyaya idzi kana shanduko diki dzakatove dzakataurwa nevashandisi kuburikidza nesocial network, mameseji emapoka uye nevamwe, asi kuona mutsauko pavhidhiyo unogara uri nani uye inoita shanduko kujekesa. Mune ino kesi izvo zvavanoratidza ndiwo madiki misiyano aripo pakati peimwe vhezheni uye imwe mumavhiki mashoma (kubvira beta 2 kuenda beta 3 yakaburitswa) yenguva iyo Apple inofanirwa kuwedzera kugadzirisa nekugadzirisa.
Zvekare rangarira izvo beta shanduro dzinogona kunge dziine mabugs kana dzisingapindirane nemamwe mafomu atinoshandisa muzuva redu zuva nezuva, saka zvakanakisa kugara padivi kana tisingade kuve nematambudziko erudzi rupi nerwupi ne iPhone yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Tine zvinopfuura zana shanduko pakati pe beta 100 uye beta 2 yeIOS 3
Zvakadii nezve bhatiri riri beta 3 ????
Pindura kuna Isemse
Zvakadii nezve bhatiri riri beta 3 ???
Zvimwe zvirinani kupfuura beta 2, asi zvakadaro uchidzika zvishoma nekukurumidza
Pavakapa iyo IOS 11, chimwe chezvinhu chakanyanya kubata pfungwa dzangu kwaive kushanduka kwayakapa patakasimudza kana kudzikisa vhoriyamu iyo icon inoshungurudza iri pakati pechidzitiro haina kuoneka, asi inoramba ichioneka uye ndizvo yatove beta 3 Pane nzira yekuchichinja here kana kuti tinofanirwa kuramba takamirira zvigadziriso zvemangwana ???
ingochinja mavhidhiyo ... kwechinguva ...?
Facebook inotanga kuyedza neGIFs mune iyo iOS app